ट्रंक लाइनबाट कुलमानले पनि लुकाएरै बिजुली दिए, किन उठाइएन महसुल ? - UrjaKhabar
राजेन्द्र तिमल्सिना बैशाख १७, २०७६ 4283
काठमाडौं– नेपाल विद्युत प्राधिकरण र यसको नेतृत्वले विगतमा उद्योगीसँग मिलेमतो गरी लुकाएर बिजुली बाँडेको आरोप लाग्ने गरेको हो । तर, अहिलेसम्म पनि पुरानो संस्कार हट्न सकेको छैन ।
उद्योगीसँग मिल्ने, कुत असुलेर बिजुली बाँडिरहने र यसबापत महसुल उठाउन बेवास्ता गर्नुले अहिलेको प्राधिकरण तथा यसको नेतृत्वले पुरानै संस्कारलाई निरन्तरता दिएको पुष्टि हुन्छ ।
प्राधिकरणले ट्रंक लाइनबाट बिजुली लिएर उपभोग गर्ने तर महसुल नतिर्ने उद्योगीलाई छुट दिएसँगै नेतृत्व (कुलमान घिसिङ) माथि प्रश्न उठेको छ । ट्रंक लाइन प्रयोग गरी बिजुली प्रयोग गरेका दर्जनौं उद्योगले अहिलेसम्म झन्डै ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी महसुल तिर्न बाँकी छ । तर, प्राधिकरण महसुल उठाउन जिम्मेवार बनेको देखिँदैन ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक तथा व्यवस्थापनमा रहेका उच्च अधिकारी नै उद्योगीसँग मिलेको आरोप लागेको छ । किनकि एउटा वितरण केन्द्र प्रमुखको रूपमा जिम्मेवारी सम्हालिरहेको कर्मचारी एक्लैले उद्योगीसँग मिलेर घुस लिने र महसुल नउठाउने धृष्टता गर्दैन ।
यसो हुँदा घुस लिने र महसुल छुट दिने ‘चेन (सञ्जाल)’ वितरण केन्द्रको कर्मचारी हुँदै क्षेत्रीय कार्यालय, सम्बन्धित निर्देशनालय प्रमुख, कार्यकारी निर्देशक, सञ्चालक समिति र मन्त्रीसम्म पुगेको प्राधिकरणकै जिम्मेवार अधिकारीको दाबी छ ।
संगठितरूपमा आर्थिक अपराध गर्ने वा घुस लिने र दिने काम भइरहेकाले यसका छिद्रहरू कमैमात्र बाहिर आउने गरेका छन् । जसबारे सर्वसाधारण अनभिज्ञजस्तै छन् । प्राधिकरण नेतृत्वको सामान्य आलोचनामा समेत विरोध जनाउने गरेका छन् ।
प्राधिकरणले हिजो लुकाएर बिजुली दिन्थ्यो र दिनेहरूबाट चर्को महसुल असुल पनि असुल गथ्र्यो । केही हाकिमले टेबलमुनिबाट कमिसन पनि नलिएका होइनन् । तर, अहिले दिनमा २० घन्टा जति बिजुली दिइएको छ । र, महसुल नउठाएर भारि छुट दिइएको छ ।
उद्योगीले २० घन्टा पनि बिजुली प्रयोग नगरेको दाबी गर्दै आएका छन् । बिजुली नै नलिई महसुल उठाउन लागेको भन्दै उद्योगी धमाधम अदालत धाउन थालेका छन् । र, अदालतले पनि उद्योगीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै गएको छ ।
किन उठेन महसुल ?
प्राधिकरणले २०७२ सालमा विद्युत महसुल बढायो । त्यतिबेला ‘ट्रंक लाइन’ भन्ने शब्द उल्लेख गरेको थिएन । डेडिकेटेड लाइनको मात्र कुरा थियो । डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली लिने ग्राहकले महँगो महसुल तिर्ने व्यवस्था थियो ।
प्राधिकरणले गरेको उक्त निर्णय तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले अनुमोदनमात्र गरेको थियो । र, ट्रंक लाइन वा डेडिकेटेड जेबाट बिजुली उपभोग गरे पनि एउटै महसुल थियो । जब प्राधिकरणले २०७३ मा पुनः महसुल निर्धारण गर्यो । र, यसमा ‘ट्रंक लाइन’ शब्द थपियो ।
घिसिङले २०७३ भदौ २९ गते कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाले । विस्तारै लोडसेडिङ अन्त्य गरे । तर, महसुल उठाउन किन प्राथमिकता दिएनन् भन्ने अहिलेको मुख्य प्रश्न हो ।
आफूभन्दा अघिका कार्यकारी निर्देशकले बदमासी गरेको वा लुकाएर उद्योगलाई बिजुली दिएको बताउँदै आएका घिसिङले ट्रंक लाइनको महसुल किन उठाएनन् ? वा उठाउन पहल गरेनन् । कि उनले पनि लुकाएर बिजुली दिए वा कम बिजुली दिएको भन्दै महसुल उठाउन नपर्ने निष्कर्षमा पुगे ?
अहिलेसम्म उठ्नुपर्ने ८ अर्ब रुपैयाँ के उद्योगीलाई मिनाह दिने हो ? कि यसमा मिलेमतो गरी आफैंले कुम्ल्याउने दाउ हो ? ८ अर्ब रुपैयाँ बैंकको मुद्दतिमा राखेको भए १० प्रतिशतले वर्षको ८० करोड रुपैयाँ ब्याजमात्र अाउँथ्यो ।